Tanora · Febroary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Tanora · Febroary, 2011
Tantara mikasika ny Tanora tamin'ny Febroary, 2011
Azia Atsinanana28 Febroary 2011
Liban: mpanao didy jadona 128 mahery no toherina?
Raha mbola eo am-panoherana ny mpanao didy jadona any aminy ny tontolo Arabo, dia tsy dia tena mitovy loatra amin'ny an'ny rehetra ny zava-misy any Liban sady somary manahirana. Araka ny voalazan'ny mpikatroka Imad Bazzi sy Ali Fakhry, dia eo ambany fitondran'ny mpanao didy jadona 128 ny vahoaka any Liban,...
Azia Atsinanana17 Febroary 2011
Nahatratra ny fetra farany ambany 1,16 % ny taham-pahaterahana any Singapore. Mba hampitomboana ny isan'ny mponina, nandroso soso-kevitra ny governemanta ny hampitomboana ny isan'ireo vahiny tonga miasa sy monina any ary mba hampivoarana ity tanàna-fanjakàna kely ity. Ireto ny valinkafatra avy amin'ireo mpitoraka bilaogy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana14 Febroary 2011
Ejipta:Fanadiovana ny Tahrir
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana13 Febroary 2011
Nandritra ireo herinandro vitsy lasa, satria "nanadio" ny fireneny tamin'ny Fahefana jadona ireo Ejiptianina, feno vahoaka ny Kianjan'ny Tahrir, feno hafaliana, ary vokatr'izany, feno zavatra tokony ho diovina. Na dia nikarakara ny trano vonjimaika nitoerany aza ireo mahery fo tao afovoan'ny Kianja, maro ireo zavatra tokony natao satria mihamanify ny...
Ejipta: Ny fotoanan'ny Fandresena
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Febroary 2011
Rehefa niala teo amin'ny Fitondrana an'i Ejipta i Mubarak dia nanomboka niseho iIreo horonantsary tahirin'ny vahoaka tamin'ny fampisehoana ireo fotoana manan-tantarasy ny fomba nandraisan'ireo vahoaka tao amin'ny Kianja Tahrir.